I-China Mineral Fiber Ceiling BH002 yomzi mveliso kunye nabavelisi | Beihua
Umbhobho woboya beglasi
Iphaneli Yoboya Yeglasi
Uluhlu loLwelo loGlasi
Iphaneli enguWoo Wool
Ilaphu leWol Wool
I-Mineral Fibre Ceiling BH002
Inkqubo yokuveliswa kweephaneli zoboya obunamaminerali kunzima kakhulu, ikakhulu kubandakanya ukukopisha ucingo olunamanzi amane, ukujikeleza isikrini esimanzi, indlela eyomileyo yokudlula kunye nokubumba, indlela eyomileyo, njl njl. Umgca wokuvelisa okuzenzekelayo wenkampani yethu wamkela ucingo olunamanzi amane edrafti, ngokudonsa, Ukucocwa kocingo ezine, ukuhambisa amanzi emzimbeni, ukubetha, ukomisa, ukutshiza, ukutshiza kunye nokugqiba.
1. Beka inani elithile loboya bezimbiwa kwisitya kwaye uvuse ngamanzi ukwahlula ikotoni kwibhola ye-slag. Ibhola ye-slag iwela ezantsi. Izongezo ezinje ngokuncamathela kunye nokubuyiswa kwamanzi zixutywe kwaye zivuselelelwe kwisilayidi ngokwemilinganiselo, emva koko yenziwa kumatshini amane we -rini. Kwinkqubo, ukuthambeka kuyacocwa, kuthathelwe indawo, kwaye kukhutshelwe kwilize elinobunzima obuthile. Emva kokusika, yomile ukwenza ibhodi yemihlaba engaphantsi.
2. Imveliso egqityiweyo yongiwe ukuze ivelise imingxunya engenanto yobukhulu obuhlukeneyo kunye neemilo zokwandisa isiphumo sokungenisa isandi, emva koko ugqibe umphetho, ipeyinti kunye nokomisa.
Ubungako bunokuveliswa ku-595x595mm, 600x600mm, 603x603mm, 610x610mm, 625x625mm, 603x1212mm, 595x1195mm, 600x1200mm, njl. Iipateni ezingaphezulu ngumngxunya wephini, umphezulu ocolekileyo, iintshulube, isanti yokugqobhoza, iqhekeza, njl njl. Ibhodi yoboya yamaminerali ingaba yindawo evakalayo, ukufudunyezwa bubushushu, kunye nobungqina bomlilo. Namphi na imveliso ayinayo i-asbestos, ayinabungozi emzimbeni womntu kwaye inomsebenzi wokulungisa isosi. Isetyenziswe ngokubanzi kwizakhiwo ezahlukeneyo zophahla kunye nomhlobiso wangaphakathi odongeni; ezinje ngehotele, iivenkile zokutyela, iithiyetha, iivenkile zokuthenga, iiofisi, amagumbi osasazo, i studio, amagumbi ekhompyutha kunye nezakhiwo zemizi-mveliso.
Izilumkiso zokufakelwa kwibhodi yoboya beminerali
1. Ngexesha lokufakwa kwebhodi yezimbiwa zoboya, igumbi kufuneka litywinwe ukukhusela umoya omanzi ukuba ungangeni, kwimeko yebhodi yezamaminerali e-oveni.
2. Ngexesha lenkqubo yokufaka, abasebenzi kufuneka banxibe iigloves ezicocekileyo ukugcina umphezulu webhodi yezamaminerali ucocekile.
Edlulileyo: I-Mineral Fibre Ceiling BC004
Okulandelayo: I-Mineral Fibre Ceiling BC005
I-Mineral Fibre Ceiling BH003
I-Mineral Fibre Ceiling BC005
I-Mineral Fibre Ceiling BC004
I-Mineral Fibre Ceiling BH004
I-Mineral Fibre Ceiling BD001